Shir looga Hadlayay Nidaamka Xisbiyada badan ee Puntland oo Garowe lagu Qabtay – Radio Daljir
Maarso 9, 2016 9:26 b 0
Bacaadweyn, Maarso 09, 2016 (Daljir) —Wafti ka socda Midowga Yurub oo soo gaarey ‪ ‎Garowe‬, ayaa kulan muhiim ah la qaatey masuuliyiinta iyo howl-wadeenada xarunta PDRC.
Dhinacyada kulmey waxay si qoto dheer uga hadleen horumarada siyaasadeed ee ka soconaya dalka, gaar ahaan hindisaha Puntland ay ku doonayso dimuqraadiyeynta nidaamka dawladnimo iyo hirgalinta asxaabta.
Hay’adda PDRC, iyada oo ka duulaysa natiijayada daraasado dhowr ah oo ay hirgalisay iyo xeel-dheerida ay u leedahay wacyiga gudaha dalka, waxay warbixin iyo saadaal wanaagsan ka bixisay hirgalinta barnaamijka dimuqraadiyeynta ee ‎Puntland‬, iyadoo ka codsatay wakiilada ka socday Midowga Yurub (EU) in gudiga cusub ee doorashooyinka Puntland laga taageero dhan dhaqaale iyo mid farsamo, sidoo kale xaruntu (PDRC) waxa ay u xaqiijisay midowga yurub in ay sii wadi doonto taageerada farsamo iyo la shaqaynta gudiga doorashooyinka.
Waxaa xusid mudan, in Labada dhinacba ay isla qireen in aqoonta iyo garaadka uu aad uga duwan yahay ugana fiican yahay sidii uu ahaa dhowr sano ka hor, taasi oo ugu wacan tahay khibradii iyo aqoontii laga dhaxlay isku-day’gii 1aad ee hanaanka xisbiyada badnaa oo markii dambe la hakiyey july 13, 2013, taasi oo ugu yaraan Puntland maanta ka caawindoonta in aan wax kasta kow laga bilaabi-doonin.
Dhanka kale, Midowga Yurub (EU) waa maal-galiyaha ugu weyn ee taageera inta badan barnaamijta ay xarunta PDRC hirgalisay 15-kii sano ee ugu dambeeyey.
Sidoo kale, waxaa xusid mudan in xarunta ‪‎PDRC‬ ka saaciday-say waftiga ka socday midowga Yurub fududeynta kulamo isdabo-joog ah oo ka dhacay xarunteeda, kuwaas oo ay wakiilada midowga yurub ku arkayeen xubnaha Gudiga Doorashooyinka Puntland, Ururadda Bulshada Rayidka ah, iyo wasaaradaha Amniga iyo Dimuqraadiyeynta oo ay wasiiradoodu goob-joog ka ahaayeen kulamadii maanta.